မွနျမာနိုငျငံမှာ စတငျကစားနိုငျတော့မယျ့ MMORPG ဂိမျးသဈ “DekaronOnline” – Gaming Noodle
မွနျမာနိုငျငံမှာ စတငျကစားနိုငျတော့မယျ့ MMORPG ဂိမျးသဈ “Dekaron Online”
GODLIKE Games မှ ထုတျလုပျလိုကျတဲ့ Dekaron Online ဂိမျးဟာ တဈကွော့ပွနျ အသကျဝငျလာပါပွီ။ ဒီဂိမျးကို မွနျမာ၊ ထိုငျးနဲ့ လာအို အပါအဝငျ နိုငျငံအမြားအပွားမှာ စတငျ ဆော့ကစားနိုငျတော့မှာ ဖွဈပွီး ထိုငျးနဲ့ အင်ျဂလိပျ ဘာသာစကား နှဈမြိုးဖွငျ့ free-to-play ဆော့ကစားနိုငျမှာပါ။
အခုခြိနျမှာ Dekaron Online ဂိမျးရဲ့ ဘီတာစမျးသပျအဆငျ့ အောငျမွငျစှာ ပွီးဆုံးသှားပွီ ဖွဈတာကွောငျ့ အတူတူ ဆော့ကစားကွမယျ့ သူငယျခငျြးတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ ၂၀၂၀ ဇူလိုငျလ ၂၃ ရကျနမှေ့ာ တရားဝငျ စတငျ ဆော့ကစားနိုငျမှာ ဖွဈပွီး “Helion” နဲ့ “Arch” ဆာဗာနှဈခုမှာ ဆုံတှကွေ့ရအောငျလား!
နောကျပွီး စမျးသပျအဆငျ့မှာတုနျးကလညျး ကစားသမားတှေ အမြားကွီး ပါဝငျခဲ့ကွတာကွောငျ့ အဲဒီထဲက ဆော့ကစားနသေူတှရေော၊ ကစားသမား အသဈတှပေါ ဝငျရောကျကစားနိုငျကွတော့မှာပါ။ Dekaron ကမ်ဘာမှာ ကှဲပွားတဲ့ စှနျ့စားခနျးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ အားလုံးနဲ့ရငျးနှီးပွီးသား Dekaron ရဲ့စတိုငျဖွဈတဲ့ လယျဗယျတငျပွီး Dungeon တှကေို ဝငျရောကျတိုကျခိုကျနိုငျမှာ ဖွဈသလို ကစားသမား တှကွေားမှာလညျး အခငျြးခငျြး တိုကျခိုကျနိုငျဦးမှာပါ။
တရားဝငျထုတျလှငျ့ရကျ : ဇူလိုငျ ၂၃ ၊ ၂၀၂၀
ဒီမှာ စာရငျးသှငျးပါ : https://billing.god.in.th/register_en.php
Download : https://www.dekaron.asia/en/download
ဒီဂိမျးဟာ လူတိုငျး ပါဝငျကစား ပြျောရှငျနိုငျမယျ့ Feature တှေ အမြားအပွား ပါဝငျသလို စိတျနှဈပွီး Hardcore ကစားခငျြတဲ့ ဂိမျမာတှေ အတှကျ PK စနဈကိုလညျး ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။
● PvP & PK System
Dekaron Online ဂိမျးထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ နောကျထပျစနဈတဈခုကတော့ PvP နဲ့ PK စနဈပါပဲ။ ကစားသမား တှကွေားမှာ အခငျြးခငျြး တိုကျခိုကျရမယျ့ PvP (Player vs Player) စတိုငျက သုံးမြိုးတောငျ ပါဝငျပါတယျ။ Duel စနဈမှာ တဈယောကျတဈယောကျခငျြး တိုကျခိုကျနိုငျသလို၊ ပါတီလိုကျ တိုကျခိုကျခငျြရငျလညျး PartyPvP စနဈနဲ့ စိတျချေါနိုငျမှာပါ။ နောကျဆုံးစနဈကတော့ အားလုံးဝငျတိုကျနိုငျမယျ့ Free PK (Free-for-all) စနဈပဲ ဖွဈပါတယျ။
Guild စနဈကလညျး ကစားသမားတှေ ပြျောရှငျဖို့အတှကျ မပါမဖွဈ စနဈတဈခုဖွဈပွီး လယျဗယျတငျဖို့၊ အတူ စှနျ့စား တိုကျခိုကျနိုငျဖို့ နဲ့ Quest တှေ အတူလုပျဖို့ ကူညီမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ Guild စနဈထဲမှာ ဘာတှေ ထပျလုပျလို့ ရဦးမလဲ ဆိုတာကို နောကျထပျ သတငျးတှမှော ဆကျလကျ စောငျ့စားကွညျ့လိုကျပါဦး။
● Instance Dungeons
Dekaron ဂိမျးထဲမှာ ကစားသူတှေ ကိုယျ့ရဲ့ စှမျးရညျမြားအား လကေ့ငျြ့ဖို့နဲ့ စိနျချေါနိုငျဖို့ လယျဗယျအလိုကျ Dungeon တှေ ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ Instance Dungeon တှကေနေ မညျသူမဆို ရနျသူတှကေို တိုကျခိုကျကာ အရေးပါတဲ့ ပစ်စညျးတှေ ရယူနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Dungeon တှကေ သငျ့အတှကျ EXP, DIL နဲ့ ကှဲပွားတဲ့ Item တှေ ရရှိနိုငျမှာပါ။
● Fishing System
စှနျ့စားခနျးတှေ ထှကျရတာ မောလာပွီ ဆိုရငျတော့ ငါးမြှားခွငျးနဲ့ အနားယူလိုကျပါ။ ကိုယျ ဖမျးမိတဲ့ ငါးတှကေို စားသောကျခွငျးဖွငျ့ HP သို့မဟုတျ MP ပွနျဖွညျ့နိုငျသလို တခြို့ငါးတှကေ အထူး စှမျးအားတိုးမွှငျ့မှုတှေ ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။
ဒီဂိမျးမှာ Class ၁၂ ခုလုံးကို စတငျဆော့ကစားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
● Aloken – လှံရှညျကို အဓိကလကျနကျအဖွဈ အသုံးပွုတဲ့ အမြိုးသမီး စဈသညျတျော
● Azure Knight – အားလုံးထဲမှာ ခံနိုငျရညျ အမွငျ့ဆုံးနဲ့ အလေးလံဆုံး Tank
● Bagi Warrior – Azure Knight ပွီးရငျ ခံနိုငျရညျအမွငျ့ဆုံး နဲ့ ကာကှယျဖို့ နညျးလမျးမြားစှာ အသုံးပွုနိုငျတဲ့ Tank
● Black Wizard – အမှောငျစှမျးအားကို လလေ့ာအသုံးခပြွီး ရနျသူတှကေို တိုကျခိုကျတဲ့ မှျောဆရာ
● Conserra Summoner – လုပျကွံသတျဖွတျသူတှရေဲ့ စှမျးရညျနဲ့ အဆိပျကို အသုံးခတြတျတဲ့ Summoner
● Dragon Knight – သှကျလကျစှာ လှုပျရှားပွီး ကွမျးတမျးတဲ့ တိုကျခိုကျမှု စှမျးရညျနဲ့ တူကွီးကို အသုံးပွုတဲ့ ခဈြစရာ မိနျးကလေးတဈဦး
● Half Bagi – ခံနိုငျရညျ စှမျးအားမြားစှာ ပိုငျဆိုငျတဲ့ အလယျအလတျတနျးစား Tank
● Incar Magician – မီး၊ ရခေဲနဲ့ မိုးကွိုး သုံးမြိုးကို ရောစပျတိုကျခိုကျနိုငျတဲ့ မှျောဆရာ
● Segeuriper – ရနျသူတှကေို ကြိနျစာတိုကျပွီး တိုကျခိုကျမှု စှမျးရညျကို စုပျယူနိုငျတဲ့ Support
● Segita Hunter – Dekaron ဂိမျးထဲမှာ အဝေးဆုံးကနေ တိုကျခိုကျနိုငျတဲ့ တဈဦးတညျးသော လေးသညျတျော
● Segnale – သှေးပွနျဖွညျ့ပေးနိုငျ၊ စှမျးအားမွှငျ့တငျပေးနိုငျပွီး မိတျဆှတှေကေို ပွနျရှငျပေးနိုငျတဲ့ Support
● Vicious Summoner – သှေးပွနျဖွညျ့နိုငျပွီး တဈကိုယျတျော စှနျ့စားခနျး ဖှငျ့နိုငျတဲ့ Summoner
ဒီနပေဲ့ Dekaron Online မှာ ဆုံတှပွေီ့း ပြျောပြျောရှငျရှငျ ကစားကွရအောငျ !!
သတငျးနဲ့ ပွောငျးလဲခကျြအသဈတှအေတှကျ ဝကျဆိုကျနဲ့ ဆိုရှယျစာမကျြနှာတှကေို Follow ထားပါဦးနျော။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင်ကစားနိုင်တော့မယ့် MMORPG ဂိမ်းသစ် “Dekaron Online”
GODLIKE Games မှ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Dekaron Online ဂိမ်းဟာ တစ်ကြော့ပြန် အသက်ဝင်လာပါပြီ။ ဒီဂိမ်းကို မြန်မာ၊ ထိုင်းနဲ့ လာအို အပါအဝင် နိုင်ငံအများအပြားမှာ စတင် ဆော့ကစားနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနဲ့ အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား နှစ်မျိုးဖြင့် free-to-play ဆော့ကစားနိုင်မှာပါ။
အခုချိန်မှာ Dekaron Online ဂိမ်းရဲ့ ဘီတာစမ်းသပ်အဆင့် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပြီ ဖြစ်တာကြောင့် အတူတူ ဆော့ကစားကြမယ့် သူငယ်ချင်းတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ တရားဝင် စတင် ဆော့ကစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး “Helion” နဲ့ “Arch” ဆာဗာနှစ်ခုမှာ ဆုံတွေ့ကြရအောင်လား!
နောက်ပြီး စမ်းသပ်အဆင့်မှာတုန်းကလည်း ကစားသမားတွေ အများကြီး ပါဝင်ခဲ့ကြတာကြောင့် အဲဒီထဲက ဆော့ကစားနေသူတွေရော၊ ကစားသမား အသစ်တွေပါ ဝင်ရောက်ကစားနိုင်ကြတော့မှာပါ။ Dekaron ကမ္ဘာမှာ ကွဲပြားတဲ့ စွန့်စားခန်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသား Dekaron ရဲ့စတိုင်ဖြစ်တဲ့ လယ်ဗယ်တင်ပြီး Dungeon တွေကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို ကစားသမား တွေကြားမှာလည်း အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်နိုင်ဦးမှာပါ။
တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ရက် : ဇူလိုင် ၂၃ ၊ ၂၀၂၀
ဒီမှာ စာရင်းသွင်းပါ : https://billing.god.in.th/register_en.php
ဒီဂိမ်းဟာ လူတိုင်း ပါဝင်ကစား ပျော်ရွှင်နိုင်မယ့် Feature တွေ အများအပြား ပါဝင်သလို စိတ်နှစ်ပြီး Hardcore ကစားချင်တဲ့ ဂိမ်မာတွေ အတွက် PK စနစ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Dekaron Online ဂိမ်းထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ နောက်ထပ်စနစ်တစ်ခုကတော့ PvP နဲ့ PK စနစ်ပါပဲ။ ကစားသမား တွေကြားမှာ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ရမယ့် PvP (Player vs Player) စတိုင်က သုံးမျိုးတောင် ပါဝင်ပါတယ်။ Duel စနစ်မှာ တစ်ယောက်တစ်ယောက်ချင်း တိုက်ခိုက်နိုင်သလို၊ ပါတီလိုက် တိုက်ခိုက်ချင်ရင်လည်း PartyPvP စနစ်နဲ့ စိတ်ခေါ်နိုင်မှာပါ။ နောက်ဆုံးစနစ်ကတော့ အားလုံးဝင်တိုက်နိုင်မယ့် Free PK (Free-for-all) စနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Guild စနစ်ကလည်း ကစားသမားတွေ ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် မပါမဖြစ် စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လယ်ဗယ်တင်ဖို့၊ အတူ စွန့်စား တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ နဲ့ Quest တွေ အတူလုပ်ဖို့ ကူညီမှာပါ။ ဒါ့အပြင် Guild စနစ်ထဲမှာ ဘာတွေ ထပ်လုပ်လို့ ရဦးမလဲ ဆိုတာကို နောက်ထပ် သတင်းတွေမှာ ဆက်လက် စောင့်စားကြည့်လိုက်ပါဦး။
Dekaron ဂိမ်းထဲမှာ ကစားသူတွေ ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းရည်များအား လေ့ကျင့်ဖို့နဲ့ စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ လယ်ဗယ်အလိုက် Dungeon တွေ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Instance Dungeon တွေကနေ မည်သူမဆို ရန်သူတွေကို တိုက်ခိုက်ကာ အရေးပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Dungeon တွေက သင့်အတွက် EXP, DIL နဲ့ ကွဲပြားတဲ့ Item တွေ ရရှိနိုင်မှာပါ။
စွန့်စားခန်းတွေ ထွက်ရတာ မောလာပြီ ဆိုရင်တော့ ငါးမျှားခြင်းနဲ့ အနားယူလိုက်ပါ။ ကိုယ် ဖမ်းမိတဲ့ ငါးတွေကို စားသောက်ခြင်းဖြင့် HP သို့မဟုတ် MP ပြန်ဖြည့်နိုင်သလို တချို့ငါးတွေက အထူး စွမ်းအားတိုးမြှင့်မှုတွေ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီဂိမ်းမှာ Class ၁၂ ခုလုံးကို စတင်ဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
● Aloken – လှံရှည်ကို အဓိကလက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုတဲ့ အမျိုးသမီး စစ်သည်တော်
● Azure Knight – အားလုံးထဲမှာ ခံနိုင်ရည် အမြင့်ဆုံးနဲ့ အလေးလံဆုံး Tank
● Bagi Warrior – Azure Knight ပြီးရင် ခံနိုင်ရည်အမြင့်ဆုံး နဲ့ ကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်းများစွာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Tank
● Black Wizard – အမှောင်စွမ်းအားကို လေ့လာအသုံးချပြီး ရန်သူတွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့ မှော်ဆရာ
● Conserra Summoner – လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူတွေရဲ့ စွမ်းရည်နဲ့ အဆိပ်ကို အသုံးချတတ်တဲ့ Summoner
● Dragon Knight – သွက်လက်စွာ လှုပ်ရှားပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့ တိုက်ခိုက်မှု စွမ်းရည်နဲ့ တူကြီးကို အသုံးပြုတဲ့ ချစ်စရာ မိန်းကလေးတစ်ဦး
● Half Bagi – ခံနိုင်ရည် စွမ်းအားများစွာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အလယ်အလတ်တန်းစား Tank
● Incar Magician – မီး၊ ရေခဲနဲ့ မိုးကြိုး သုံးမျိုးကို ရောစပ်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ မှော်ဆရာ
● Segeuriper – ရန်သူတွေကို ကျိန်စာတိုက်ပြီး တိုက်ခိုက်မှု စွမ်းရည်ကို စုပ်ယူနိုင်တဲ့ Support
● Segita Hunter – Dekaron ဂိမ်းထဲမှာ အဝေးဆုံးကနေ တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော လေးသည်တော်
● Segnale – သွေးပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်၊ စွမ်းအားမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး မိတ်ဆွေတွေကို ပြန်ရှင်ပေးနိုင်တဲ့ Support
● Vicious Summoner – သွေးပြန်ဖြည့်နိုင်ပြီး တစ်ကိုယ်တော် စွန့်စားခန်း ဖွင့်နိုင်တဲ့ Summoner
ဒီနေ့ပဲ Dekaron Online မှာ ဆုံတွေ့ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကစားကြရအောင် !!
သတင်းနဲ့ ပြောင်းလဲချက်အသစ်တွေအတွက် ဝက်ဆိုက်နဲ့ ဆိုရှယ်စာမျက်နှာတွေကို Follow ထားပါဦးနော်။